कृष्ण थापाको साँसद पद खोस्न गण्डकीका सभामुख माओवादी भए - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार १३:५३
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद खोस्न गण्डकीका सभामुख माओवादी भएका छन् । थापाको आफ्नै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले साँसद खारेजी गरिदिएपछि, उनको माग निवेदन अनुसार सर्वाेच्चले थापालाई साँसद पद खारेजी नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ । अहिले सभामुख जस्तो स्वतन्त्र र गरिमामय ओहोदाको हैसियतमाथि प्रश्न गठ्ने गरि गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।
अदालतले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भ्याकेट निवेदन लिएर सभामुख अधिकारी अदालत पुगेको अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
सभामुख अधिकारी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च पुगेका थिए । तर हिजो समय कटिसकेको भन्दै अदालतले उनको निवेदन लिएको थिएन । सभामुखले निवेदन दिइसकेको र अध्ययन पछि दर्ता हुने पौडेलले बताए । मंगलबार समय नभएर दर्ता नभएको निवेदन बुधबार दिउँसो २ वजेसम्म दर्ता हुने पौडेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सभामुखले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर सर्वोच्च गएको बताउँछन । सभामुख भएर अर्को पार्टिको सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च जानुले उनी माओवादी पार्टिको कार्यकर्ताको रुपमा खटिएको पुष्टि हसन्छ । अधिकारी सभामुखको मर्यादा उल्लंघन गरे । ‘सभामुखको भूमिका के हो ? त्यसरी जान मिल्छ ? म विरुद्ध सभामुख नै प्रचारबाजीमा आउनुभयो,’ थापाले यतो बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी अन्तरिम आदेश आएको विषयमा त्यो प्रतिकूल छ भनेर अदालत जाने कानुनी बाटो भए पनि खास सरोकारावाला जानुपर्ने धारणा राख्छन् । उनकै भनाइमा खास सरोकारवाला राष्ट्रिय जनमोर्चा हो । राष्ट्रिय जनमोर्चा चुपचाप बसेको छ । माओवादीका नामबाट सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन लिएर जानु व्यवहारिक र सही होईन कानूनविदको यस्तो जिकिर छ ।
‘जसले कारबाहीको डन्डा चलाएको हो, उही नै प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो,’ उनले भने, ‘सभामुख त तटस्थ पद हो, नैतिकताको हिसाबले उहाँ जानु जायज देखिन्न ।’ तर जनमोर्चाभन्दा एक कदम अघि सरेर सभामुख अधिकारी सर्वोच्च पुगे । यो सभामुखको मर्यादा पनि भुलियो र माआोवादी भएर जनमोर्चाका साँसदलाई कार्वाही गर्छुभन्नु नैतिक विषय होईन ।
विपक्षी गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार जसरी पनि ढाल्ने मर्नु बाँच्नुको कहर छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने विपक्षी मोर्चाको कसरतका लागि जनमोर्चा सांसदमाथिको कारबाही कायम राख्न सभामुख निवेदनसहित सर्वोच्चमा पुगेको देखिन्छ ।
न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो ।
सांसद थापाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट परेको थियो । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र पाटन उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।
आफूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही बदरभागी रहेको उनले दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिएपछि विपक्षी दलले अन्तिम कसरत थालेका छन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले मंगलबार सदनमा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराइसकेका छन ।
२९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ २७ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने तयारी छ । गत २६ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि संविधानको १६८(२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेकी थिइन । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका हुन् ।